Umaki: abathengisi | Martech Zone
I-Sellics Benchmarker: Ungalinganisa Kanjani I-akhawunti Yakho Yokukhangisa ye-Amazon
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 15, i-2022 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 15, i-2022 Douglas Karr
Kuvame ukuba nezikhathi lapho sizibuza khona, njengabakhangisi, ukuthi imali esetshenziswa yizikhangiso iqhuba kanjani uma kuqhathaniswa nabanye abakhangisi embonini yethu noma esiteshini esithile. Amasistimu ebhentshimakhi adizayinelwe ngalesi sizathu - futhi i-Sellics inombiko webhentshimakhi wamahhala, ophelele we-Akhawunti yakho Yokukhangisa ye-Amazon ukuze uqhathanise ukusebenza kwakho nabanye. I-Amazon Advertising Ukukhangisa kwe-Amazon kunikeza abakhangisi izindlela zokuthuthukisa ukubonakala kumakhasimende ukuze bathole, baphequlule, futhi bathengele imikhiqizo.
Njengoba kushiwo ngaphambili ku-Everything You Need to Know About Artificial Intelligence and Its Impact on PPC, Native, and Display Advertising, lolu luhlu lwezingxenye ezimbili zezindatshana ezigxile kwabezindaba abakhokhelwayo, ubuhlakani bokuzenzela kanye nokukhangisa komdabu. Ngichithe izinyanga ezimbalwa ezedlule ngenza ucwaningo oluningi kulezi zindawo ezithile ezigcine ngokushicilelwa kwama-ebook amabili amahhala. Owokuqala, Konke Okudingayo Ukuze Ukwazi Ngezibalo Zokumaketha kanye Nobuhlakani Bokufakelwa,